သန်းပေါင်းများစွာသော, ဘီလီယံ, ထရီလီယံမှနံပါတ်များ, crores, converter ကိုသန်းပေါင်းများစွာ, ဘီလီယံ, ထရီလီယံ, ထောင်ပေါင်းများစွာ, သိန်းကျော်နှင့်ကုဋေမှနံပါတ်များကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုသည် lakhs ။ ဒါ့အပြင်သင်သည်မည်သည့်အရေအတွက်သုည၏မည်မျှသိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
က Short စကေး - တိုင်းအသစ်သက်တမ်း သာ. ကြီးမြတ်ထက်သန်းယခင်သက်တမ်းတစ်ခုထက်တထောင်ကြိမ်ပိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။
Long ကစကေး - တိုင်းအသစ်သက်တမ်း သာ. ကြီးမြတ်ထက်သန်းယခင်သက်တမ်းတစ်ခုထက်သန်းကြိမ်ပိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။